Cuntada loogu baahan yahay heerkulka hoose: sidee loola dagaallamaa qabowga? | Ragga Stylish
Nafaqooyinka si ay ula dagaalamaan dhaxanta
Paco Maria Garcia | | Nafaqeyn
Marka ay timaado nafaqada waxaa had iyo jeer lagu talinayaa in la raadsado oo la cuno cuntooyinkaas awood u leh inay daboolaan baahiyaha jidhka oo xitaa la dagaalamo dhaxanta.
¿Waxa la cabbo marka heer kulku hoos u dhaco? Halkan waxaan ku arki doonaa nafaqooyinka lagama maarmaanka ah.
1 Waa maxay nafaqooyinka ka caawin kara la dagaallanka hargabka?
1.1 Fiitamiin C
1.2 Fiitamiin A
1.5 Vitamin B12
Waa maxay nafaqooyinka ka caawin kara la dagaallanka hargabka?
Waxaa ka mid ah nafaqooyinkaas oo sida caadiga ah loo aqoonsado inay yihiin kuwa ugu waxtarka badan jirka diirimaadkiisa, iyadoo la siinayo waxtarro, waxaa ka mid ah
Fiitamiinkan ayaa ah lagama maarmaanka u ah kor u qaadista difaaca iyo la dagaallanka hargabka in jirka bini'aadamku xanuunsan karo, sidoo kalena qabowga ka ilaaliyo.
Faytamiin C waxaa laga heli karaa cuntooyinka ay ka midka yihiin liinta, liinta, kiwi, strawberry, iyo yaanyo.
Faytamiinkani wuxuu kobciyaa horumarka ilkaha, unugyo jilicsan, xuubabka xuubka iyo maqaarka, iyo sidoo kale Waxay kaa caawin kartaa xakameynta heerka heerkulka jirka, sidaas darteedna aad waxtar ugu leh la dagaallanka qabowga.
Waxaa laga heli karaa cuntooyinka sida karootada, broccoli, iyo isbinaajka.
Antioxidants waa qayb aasaasi ah oo ka mid ah cuntada aadanaha, Waxay bixiyaan caafimaad wanaagsan waxayna yareeyaan halista ah inuu ku dhaco cudurradaas inta badan dadka ku dhaca. Tani waa xaalada qandho, madax xanuun iyo ifilo.
Si la mid ah, sidoo kale Waxay doorbidaan habka difaaca jirka, taasoo ka dhigeysa inuusan ku dhicin arrimo kala duwan sida kuleylka, huurka ama qabowga badan.
Antioxidants guud ahaan waxay ku jiraan cuntooyinka caleenta cagaaran sida isbinaajka, artichokes, iyo salaarta.
Sida fosfooraska, cunsurkan wuxuu ka mid yahay macdanaha loogu isticmaalka badan yahay qabowgamaadaama ay siiyaan tamar aad u tiro badan jirka.
Nafaqadan waxaa laga helaa tiro aad u tiro badan sida lowska, yicibta, lowska geedaha, iniinta, iniinta.
Koox ka kooban 12 fiitamiin ayaa loo yaqaan fitamiin B8 kuwaas oo si weyn uga faa’iideysanaya shaqada maskaxda, nidaamka neerfaha, sameynta dhiigga iyo borotiinno kala duwan oo muhiim u ah jirka aadanaha.
Cunsurkan waxaa laga helaa tiro badan hilibka guduudan iyo kuwa cad, cuntooyinka sidoo kale hodan ku ah birta iyo folic acid.
Ilaha sawirka: Fitness Fast / Clarín
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Nafaqooyinka si ay ula dagaalamaan dhaxanta
Ku cusbooneysii dharkaaga dharka cusub ee loo yaqaan 'Uniqlo'
Shan taxane oo cusub si aad u daawato jiilaalkan